ပေါချောင်ကောင်း နဲ့ ရပါကဆန်းချက်ကို လစာငွေ အနည်းအငယ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ချဉ်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန် အသင်း – Zeekwat Hot News
ပေါချောင်ကောင်း နဲ့ ရပါကဆန်းချက်ကို လစာငွေ အနည်းအငယ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ချဉ်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန် အသင်း
May 17, 2019036
ဆန်းချက် ဟာ ၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီ ဈေးကွက် အတွင်းမှာ မစ်ခီတာရန်း နဲ့ အလဲအထပ်အဖြစ် ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အိုးထရက်ဖို့ဒ်မြေကို ရောက်ရှိအပြီးမှာ ခြေစွမ်းကောင်းရဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အခုချိန်မှာ သူ့အပေါ် ခံစားခွင့် အလွန်အမင်းပေးအပ်ထားမှု အပေါ်ကို အသင်းရဲ့ ထိပ်တန်း ကစားသမား အချို့ကအမြင် မကြည်လင်မှုတွေရှိနေ ခဲ့ပြီလို့သိ ရပါတယ်။ယူနိုက်တက် အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ လစာငွေ အမြောက်အများပေးချေ နေရတဲ့ ဒီချီလီ
သားကို အခုနွေရာသီ ဈေးကွက် ဖွင့်ချိန်မှာ ရောင်းထုတ်ပြီးချင်နေခဲ့တာပါ ဆန်းချက် ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အီတလီ အခြေစိုက် အသင်းတွေ ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီး ဂျုဗီ နဲ့ အင်တာအသင်းတို့က ကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ ဖာနန်ဒို ဖယ်လီစီဗစ်နဲ့တောင် ဆွေးနွေး မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီလို့ Daily Mail သတင်းစာကဆိုပါတယ်။ အဆို ပါ ၂သင်းစလုံး ဟာ ဆန်းချက်ရဲ့ တနှစ်စာလခ ဖြစ်တဲ့ ပေါင် ၂၆သန်းကနေ လျှော့ခိုင်းရာမှာ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဖာနန်ဒိုဖယ်လီစီဗစ်ကတော့ သူ့ကစားသမားဟာ အနည်းဆုံး တပတ်
လုပ်ခ (အခွန်ဆောင်ပြီး )ပေါင် 2သိန်းနီးပါ ရသင့် တယ် လို့ ဈေးခေါ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။Daily Mail ဂျာနယ်လစ် တဦးဖြစ်တဲ့ အဒမ်ခရက်ဖ်တန် ရဲ့အဆိုအရ အင်တာ အသင်း ဟာ ဆန်းချက်ကို အခုနွေမှာ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ပုံမှန် ချဉ်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး ယူနိုက်တက် အသင်းဘက်ကလည်း ပြောင်း ရွှေ့ကြေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပေးသွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ယူနိုက်တက် အသင်းကတော့ ဆန်းချက်ရဲ့ နေရာအတွက် နီကိုလက်စ်ပီပီ သို့မဟုတ် ဒန်နီရယ် ဂျိန်းစ်တဦးဦးကို ခေါ်ယူသွားဖို့ ချိတ်ဆက်မှုတွေပြု လုပ်နေပါတယ်။ လိုင်လီ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား ပီပီဟာ ဒီရာသီမှာ လီဂူးပွဲစဉ် ၃၆ပွဲ ပါဝင်ကစားပေးထားအပြီးမှာ ၃၁ ဂိုးအထိပါဝင် ပတ်သက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါခြောငျကောငျး နဲ့ ရပါကဆနျးခကျြကို လစာငှေ အနညျးအငယျနဲ့ ချေါယူနိုငျဖို့ ခဉျြးကပျမှုတှပွေုလုပျနခေဲ့တဲ့ အငျတာမီလနျ အသငျး
ဆနျးခကျြ ဟာ ၂၀၁၈ ဆောငျးရာသီ စြေးကှကျ အတှငျးမှာ မဈခီတာရနျး နဲ့ အလဲအထပျအဖွဈ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တာဖွဈပွီး အိုးထရကျဖို့ဒျမွကေို ရောကျရှိအပွီးမှာ ခွစှေမျးကောငျးရဖို့ ရုနျးကနျနခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အခုခြိနျမှာ သူ့အပျေါ ခံစားခှငျ့ အလှနျအမငျးပေးအပျထားမှု အပျေါကို အသငျးရဲ့ ထိပျတနျး ကစားသမား အခြို့ကအမွငျ မကွညျလငျမှုတှရှေိနခေဲ့ပွီလို့သိရပါတယျ။ယူနိုကျတကျ အသငျးတာဝနျရှိသူတှကေလညျး ခွစှေမျးပွနိုငျခွငျးမရှိပဲ လစာငှေ အမွောကျအမြားပေးခြေ နရေတဲ့ ဒီခြီလီ သားကို အခုနှရောသီ စြေးကှကျ ဖှငျ့ခြိနျမှာ ရောငျးထုတျပွီးခငျြနခေဲ့တာပါ ဆနျးခကျြ ကို ချေါယူနိုငျဖို့အီတလီ အခွစေိုကျ အသငျးတှကေစိတျဝငျစားနတောဖွဈပွီး ဂြုဗီ နဲ့ အငျတာအသငျးတို့က ကစားသမားရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူ ဖာနနျဒို ဖယျလီစီဗဈနဲ့တောငျ ဆှေးနှေးမှုတှပွေုလုပျထားခဲ့ပွီလို့ Daily Mail သတငျးစာကဆိုပါတယျ။ အဆို ပါ ၂သငျးစလုံး ဟာ ဆနျးခကျြရဲ့ တနှဈစာလခ ဖွဈတဲ့ ပေါငျ ၂၆သနျးကနေ လြှော့ခိုငျးရာမှာ အဆငျပွသှေားခဲ့ပွီ ဖွဈပမေယျ့ ဖာနနျဒိုဖယျလီစီဗဈကတော့ သူ့ကစားသမားဟာ အနညျးဆုံးတပတျလုပျခ(အခှနျဆောငျပွီး )ပေါငျ 2သိနျးနီးပါ ရသငျ့ တယျ လို့ စြေးချေါနတေယျလို့ သိရပါတယျ။Daily Mail ဂြာနယျလဈ တဦးဖွဈတဲ့ အဒမျခရကျဖျတနျ ရဲ့အဆိုအရ အငျတာ အသငျး ဟာ ဆနျးခကျြကို အခုနှမှော ချေါယူနိုငျဖို့ ပုံမှနျ ခဉျြးကပျမှုတှပွေုလုပျထားပွီး ယူနိုကျတကျ အသငျးဘကျကလညျး ပွောငျး ရှကွေ့ေးကို အတတျနိုငျဆုံး လြှော့ခပြေးသှားဖို့ ရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ယူနိုကျတကျ အသငျးကတော့ ဆနျးခကျြရဲ့ နရောအတှကျ နီကိုလကျဈပီပီ သို့မဟုတျ ဒနျနီရယျ ဂြိနျးဈတဦးဦးကို ချေါယူသှားဖို့ ခြိတျဆကျမှုတှပွေု လုပျနပေါတယျ။ လိုငျလီ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ပီပီဟာ ဒီရာသီမှာ လီဂူးပှဲစဉျ ၃၆ပှဲ ပါဝငျကစားပေးထားအပွီးမှာ ၃၁ ဂိုးအထိပါဝငျ ပတျသကျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Ye Win Soe Editor
နောက်ခံလူ တစ်ယောက်ကို ရောင်းထုတ်ပြီး အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
Hey Buddy!, I found this information for you: "ပေါချောင်ကောင်း နဲ့ ရပါကဆန်းချက်ကို လစာငွေ အနည်းအငယ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ချဉ်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန် အသင်း". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/934. Thank you.